Is diiwaangelinta Musharaxiinta u taagan Xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo maanta bilaabaneysa | Baydhabo Online
Sida ay shalay shaaciyeen Guddiga qaban qaabada doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya maanta oo isniin ah waxaa bilaabanaya is diiwaan gelinta Musharaxiinta u tartamaya Xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Is diiwaangelinta Musharaxiinta ayaa waxa ay soconeysaa 23-ka April oo maanta ku beegan ilaa 24-ka April oo berri tallaado ah, waxaana watiga shaqada uu yahay 10:00-AM ilaa 05:00-PM, sida lagu sheegay warqadda ay soo saareen Guddiga qaban qaabada doorashada.
Sidoo kale,Guddiga qaban qaabada doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo shalay kullankooda 2-aad ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ayaa waxay soo saareen Jadwalka doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya,waxayna sheegeen in doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka ay dhaceyso 30-ka bishan April 2018-ka.
25 ilaa iyo 26-ka bisha April ayaa loo qoondeeyay hadal jeedinta musharaxiinta u taagan Xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ay ka horjeedinayaan Xildhibanaada Golaha Shacabka.
27 ilaa iyo 29-ka waxaa jira Diyaargarow iyo is xog wareysi ay sameynayaan Guddiga qaban qaabada doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ku aadan doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Ugu danbeyntii,Guddiga qaban qaabada doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa faray musharaxiinta u tartaramaya xilkan kana mid Golaha Wasiirada in Guddiga qaban qaabada u keenaan cadeyn ku xusan iscasilaadiisa markii uu is diiwaangelinayo.